I-China N, N, N ', N'-tetramethyl dipropylene triamine, FENTACAT 15, C ， CAS NO. Umatshini we-6711-48-4 PC15 kunye nabenzi | Imichiza yaseKerui
I-N, N, N ', N'-tetramethyl dipropylene triamine (FENTACAT 15, PC15)
Igama lorhwebo: PC15
I-N, N, N ', N'-tetramethyldipropylenetriamine (FENTACAT 15, PC15) sisixhobo sokuhambisa esingangxamiyo se-amine equilibrium, esinokhetho oluncinci kwi-urea (isocyanate-water) reaction;
N, N, N ', N'-tetramethyldipropylenetriamine (FENTACAT 15, PC15) iqulethe i-hydrogen esebenzayo, ke kulula ukuyiphendula kwi-matrix yepolymer, ngenxa yoko akuyi kubakho kuphuma kukhutshwa;
N, N, N ', N'-tetramethyldipropylenetriamine (FENTACAT 15, PC15) iphucula ukunyamezeleka komphezulu weenkqubo zokubumba ezithambileyo, kwaye inokusetyenziswa kwiinkqubo eziqinileyo ze-polyurethane ezifuna iimpendulo zempendulo egudileyo.
I-N, N, N ', N'-tetramethyldipropylenetriamine (I-FENTACAT 15, PC15) ipakishwe kwi-165 kg / igubu; igcinwe kwindawo epholileyo kwaye engenisa umoya ezindlwini, ikhuselwe kubumanzi kunye nokuvezwa lilanga. Ixesha lokugcina liinyanga ezili-12.
I-N, N, N ', N'-tetramethyldipropylenetriamine9 I-FENTACAT 15, PC15) Yimichiza yokuhlangana kwezinto eziphakathi. Nceda uphephe ukudibana namehlo kunye nolusu ngexesha lokusebenzisa. Ukuba kukho unxibelelwano, nceda uhlambe ngamanzi kwaye uthumele kugqirha ukuze afumane unyango.